Difaaca Mashruuca ee Warshadaha Difaaca Guriga | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDifaaca Mashruuca ee Warshadaha Difaaca Guriga
04 / 10 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, ISDIFAACA, TURKEY
weerarka mashruuca ee warshadaha difaaca gudaha
Mashaariicda maxalliga ah iyo kuwa qaran ee laxiriira militariga iyo amniga xuduudaha, 2. Waxaa lagu soo bandhigay Shir Madaxeedka Radar Militari ee Caalamiga ah iyo Amniga Xuduudaha
2 waa howlaha kaliya ee takhasuska leh ee duurka militariga iyo amniga xuduudaha. Radar militari caalami ah iyo Shirkii Amniga Xuduudaha ee heer qaran iyo qaran ayaa la soo bandhigay. Mashaariicda u saamaxaya waaxda difaaca Turkiga inay noqdaan kuwa asaliga ah isla markaana yaraynaya ku tiirsanaanta dalalka shisheeye ayaa iyaguna isu diyaarinaya dhoofinta.
qoriga ugu horeysay toogte Turkey ee multi-heerkiisa la soo saaray
Arms ALMAATA, qoriga ugu horeysay toogte Turkey ee multi-heerkiisa la soo bandhigay in mrbs ah '. ATA Arms, oo ka mid ah lixda shirkadood ee soo saarta badeecadan adduunka, waxay leedahay qoriga loo soo saaro dadka wax duqeeya, waxayna leeyihiin masaafo ka badan laba kun mitir. Qoriga, oo leh muuqaal laba-heer kicinaya muujinta culeyska culeyska, ayaa si shaqsi ahaaneed loogu hagaajin karaa hagaajinta badhanka, sidaas darteed wuxuu siiyaa isticmaalaha toogashada ugu raaxada badan. Wejiga qoriga waxaa lagu bedeli karaa wax ka yar hal daqiiqo shuruudaha garoonka dhexdiisa.
Xiriir deg deg ah hadda waa suurtogal dhulgariir iyo layliyo militari
Optima Technic waxay soo bandhigtay Gawaarideeda Isgaarsiinta iyo Gawaarida Taliska markii ugu horeysay MRBS ee Wasaaradda Xaaladaha Degdega ah ee Yukreeniyaan (SESU). Dhulgariirrada, aafooyinka dabiiciga ah iyo laylisyada milatariga, sida duurka si ay u bixiyaan macluumaad xaalad degdeg ah oo laga soo saaray badeecadan oo laga soo saaray taliska iyo telefoonnada isgaarsiinta iyo raadiyeyaasha, anteenooyinka radar, kaamirooyinka, iyo qalabka la midka ah. Thanks to sheyga, macluumaadka xaaladda degdegga ah waxaa lala wadaagi karaa mas'uuliyiinta ay khuseyso.
Kalashnikov rasaas guriga
Markii ugu horreysay, Turaç wuxuu soosaaray rasaas loo isticmaali karo kalashnikov iyo qoryaha dab-kaca. Rasaasta la soo saaray iyadoo ay ugu wacan tahay howlaha R&D waxay diyaar u yihiin adeegsiga ciidanka iyo gendarmerie.
Ku wareejiso macluumaad aamin ah aaladaha crypto ee wadaniga ah
Qalabka Kindi Ethernet ee loo yaqaan 'Crypto Qalabka' ee uu soo bandhigay Rovenma wuxuu awood u siiyaa aaladaha isku xira fiber-ka inay isgaadhsiiyaan midba midka kale inta u dhexeysa laba goobood oo fog. Shayga, kaas oo u oggolaanaya gudbinta xog sir ah iyo xog muhiim ah iyadoo la adeegsanayo sirta ah, waxay joojineysaa u gudbinta macluumaadka dhinaca kale iyadoo iska difaacaysa korantada iyo softiweer haddii ay dhacdo wax weerar ah. Taas oo sir karo xogta ilaa 40 Gbps dhexeeya goobaha iyo awood gudbinta badan line meesha aagga L2 ee PCB Turkey, qalabka cryptographic ugu horeeyay ee maxalli in soosaaraan gundhig xal software iyo design FPGA, wax soo saarka taxane gobolka diyaar.
Hoggaaminta Midnimada Robots
ElectroLand's Discover robot-ka yar ee la iska tuuri karo, Acrob, ayaa ah sheygii ugu horreeyay ee laga helo deegaankaan. Qiyaastii illaa saddex kiilo garaam, robotsku waxay door hoggaamineed ka ciyaaraan hawlgallada waana la tuuri karaa iyada oo aan waxyeello gaarsiin dhererka mitirka 6. Acrob sidoo kale waxay bixisaa xalin sare maalin iyo aragtida habeen iyadoo ay ugu mahadsantahay kamaradkeeda dabacsanaan leh xiniinyaha qiblada leh ee 360. Isagoo sharraxaya in ciidamada gaarka ah ay ka faa'iideysan karaan robotskan ujeedada sahaminta iyo kormeerka ka hor inta aysan fulinin howlgalka, mas'uuliyiinta shirkadda waxay sheegeen in robotyadu sidoo kale sameyn karaan khariidad gudaha ah.
Koronto la qaadan karo oo gudaha ah iyo nidaamka sawirka kuleylka
Visco Electric waxay ku dartay koronto la qaadan karo oo militari aan la tirin karin iyo nidaamka sawirka kuleylka. Waxaa loogu talagalay iyada oo loo eegayo baahiyaha hawlgallada gudaha iyo xuduudaha waxayna bixisaa tamar aan kala go 'lahayn xitaa markay jiraan xaaladaha cimilada culus; idaacadaha milatariga, boggag, kiniinno, taleefanno, sida tamar siiya aalado badan. Shayga, oo lagu soo oogi karo tamarta qorraxda ee meelaha furan, ayaa sidoo kale iftiimin kara meelaha mugdiga ah iyadoo ay ugu mahadsan tahay soo saareheeda telescopic-ka oo ballaarinaya mitirka 3. Iyada oo loo adeegsado kaamirooyinka kuleylka leh ee kuxiran dekeddeeda wi-fi, qalabku wuxuu ogaan karaa oo lafahan karaa dhaqdhaqaaqa sida bini-aadamka, xayawaan ku jira dhexroorkiisa mitirka 200 ee mugdiga ku jira, waana la kormeeri karaa oo la duubi karaa isagoo u gudbinaya sawirrada shaqaalaha ruqsadda leh iyadoo la kaashanayo kiniiniga iyo taleefanka.
Ciidanka Qatar ayaa doorbiday TAF
Raykar wuxuu ku soo kordhiyay qoriga ujeedada badan iyo golaha qalabka MRBS. Armaajooyinka, oo loo soo saaray inay kaydiso oo xafidaan hub fara badan oo dhismayaal kala duwan leh iyo dhexroor leh indhaha, ayaa sidoo kale meel ku keydista albaabadooda. Raykar, oo sidoo kale u dhoofisa alaabooyinkeeda hal-abuurka ah ee Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga ciidanka Qatar, waxay sii wadaysaa inay kala hadasho dhoofinta alaabadaas nabadgelyada shirkadaha leh Ruushka.
Hawlaha nadiifinta miinada ayaa la qoday
Shirkadda Geodo waxay dheelitir ku sameysay astaamaynteeda, khariidadeeda iyo howlaha waxqabadka ee miinada qodista waxayna ku soo bandhigtay Nidaamka Khariidaynta Smart Marking iyo Nidaamka Warbixinta markii ugu horeysay MRBS. wax soo saarka ugu horeysay gudaha dalka Turkiga ee ku yaala goobahan, TUBITAK-dhameeya terminal Xararad digital, sax centimitir waa wax macquul ah ee Positioning at, waxaa tagging element dalkii wuu Khariidadeynta geedi socodka in xogta iyo warbixinta madaxbannaan oo samaynaya sida loo baahan yahay.
6 daqiiqad duulimaad ah oo leh xNUMX kg
Drone HK-3, oo ay soo saartay MLG Technology, ayaa soo jiidatay dareenkeeda culeyska 6 kg iyo waqtiga duulimaadka daqiiqaddii 40. Culayska waxtar leh ee loo yaqaan 'drone', oo loo isticmaalo warshadaha difaaca, hubka sare, aragtida kuleylka, aragtida habeynka, waxaa loo isticmaali karaa qaybaha kala duwan sida tamarta khariidaynta madaniga ah iyo beeraha, ayaa u beddeleysa bartilmaameedka. Mashiinka '8 motorized HK-3' wuxuu sidoo kale awood u leeyahay inuu iska caabiyo xaaladaha cimilada adag.
Duulimaad aan loo fasaxin diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Gök-Börü
Waxaa loogu talagalay in lagu iftiimiyo ilaalada xadka, ilaalada xeebaha, goobidda iyo badbaadinta, xabsiyada iyo aagaga kale ee mudada dheer ah, baaxadda Gök-Börü waxay gaartaa ilaa 1,5 km. Badeecada ayaa sidoo kale soo jiidata dareenka iyada oo la siinayo kaamirooyinka loo yaqaan 'drone camera' kana hortago in ay helaan sawirro.
Khatarta argagaxa waxaa looga fogaan karaa wadista habeenkii
Nidaamka taageerada heerkulka habeenkii ee tamarta MLG ee IR-1000, mitirrada 500 ilaa meeraha wadada waa la arki karaa, mitirrada 350 ee mitirrada 150 ee dadka ka fog fog waxay u oggolaaneysaa dadka in la garto. IR-1000 7,5 waa la waafajin karaa dhammaan gawaarida rayidka iyo militariga oo leh cabbirkeeda cm oo u shaqeyn kara si waafaqsan shaashadaha gawaarida.
15 km fog ee digaagga turkey ee kala goynta ayaa la sameyn karaa xitaa
Markii ugu horreysay, Integras waxay soo bandhigtay sawirradeeda kuleylka, 15 km iyo 19 km, at MRBS. Kaamirooyinka kuleylka ah ee 15, kuwaas oo lagu kala saari karo turkiga iyo digaagga, waxay bixiyaan xalal isku dhafan oo amniga xuduudaha ah.
Mashruuca Yildirim savar wuxuu sugayaa meeleyntiisa
Asis Defence waxay soo jiidatay dareenka MRBS iyada oo leh mashruucan soo celinta hillaaca. Mashruuca, oo u shaqeeya dallad ahaan gobolka, wuxuu gobolkaas ka dhigayaa mid aan la arki karin marka loo eego hillaaca, wuxuuna meesha ka saarayaa dayacaadyadii ka dhashay hillaacyada milatariga. Saraakiisha shirkaddu waxay sheegeen in dawadan laydhka leh, oo ah sheyga kaliya ee ay NATO ogolaatay adduunka, ay dhowaan bilaabi doonto wax soo saarka gudaha.
Ka gudubka warshadaha hoose si loo soo saaro waddada tareenka
Ceva Leaves Weerar lagu qaado Gaadiidka Gaadiidka
Wadarta Quartz Motor Oils 'Weerarka Cinwaanka xoog leh
Asphalt oo lagu weeraray Degmada Tablakaya
Degmada Alanya waxay sii wadaa weerarka asfaltiga ah
Gaasiga Dabiiciga ah iyo Tareenka si kor loogu qaado Diyarbakir OSB
Weerar tareenka xawaaraha sare ah ee Kazakhstan
Xildhibaan Hasan Fehmi Kinay oo weeraray YHT Kutahya
Taageerayaasha ka socda Ururka Saxafiyiinta